Valkyrie ( 2008) CM ပရိတ်သတ်ကြီးရေ.... "သူတော်ကောင်း နတ်ကောင်းမ" ဆိုတဲ့ စကားပုံကို ယုံကြည်ကြပါသလား....ဒီစကားပုံကို အပြည့် အဝမမှန်ကြောင်း သက်သေပြနိုင်တဲ့ Valkyrie ဆိုတဲ့ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်က ဖြစ်ရပ်မှန် အဖြစ်အပျက်တစ်ခု အကြောင်း ကို ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားကို တင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်.... ဇာတ်လမ်းအကျဉ်း ........................... ကာနယ် Claus von Stauffenberg (Tom Cruise) ဟာ ဂျာမဏီအတွက် သစ္စာစောင့်သိပြီး သက်စွန့်ဆံဖျား တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့၊ ဟစ်တလာကိုယ်တိုင်က ချီးကျူးဂုဏ်ပြုရတဲ့ အရာရှိကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူဟာ ဟစ်တလာရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုတွေကြောင့် တစ်နေ့မှာ သူချစ်တဲ့ ဂျာမဏီနိုင်ငံကြီးပျက်သုဉ်းသွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ စိုးရိမ်နေတဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပဲ သူဟာ သူနဲ့ စ်ိတ်သဘောထားတူညီပြီး ဟစ်တလာရဲ့ နာဇီအစိုးရကို ဖြုတ်ချချင်နေတဲ့ ဂျာမဏီရဲ့ ထိပ်တန်းအရာရှိတစ်စုနဲ့ ပူးပေါင်းကာ ဟစ်တလာကို လုပ်ကြံဖို့ကြိုးပမ်းပါတော့တယ်။ဒီအကြံအစည်ကို ခက်ခက်ခဲခဲ အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ကြိုးစားရင်း ကာနယ် Claus von Stauffenberg ...
IMDB: 7.1/10 184,503 votes
Valkyrie ( 2008)
The Devil’s Double (2011) IMDb (7.1/10) အီရတ် အာဏာရှင် ဆက်ဒမ်ဟူစိန်ရဲ့ အကြီးဆုံးသား အူဒေး ဟူစိန်အကြောင်းကို ရိုက်ကူးပြခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကားဖြစ်ပါ တယ်။ ဒီဇာတ်ကားကို ရိုက်ကူးဖို့အတွက် အီရတ်နိုင်ငံသား လာတစ်ဖ်ရာဟိုင်း ရေးသားထားတဲ့ စာအုပ်ကို အခြေခံခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ စာအုပ်နာမည်ကလည်း The Devil’s Double ပါပဲ။ လာတစ်ဖ် ရာဟိုင်း ဆိုတာက အူဒေးဟူစိန်နဲ့ရုပ် ချင်းဆင်ပြီး အူဒေးရဲ့ ကိုယ်ပွားလူတစ်ဦးအဖြစ် နေထိုင်ခဲ့ရ သူပါ။ အီရန်-အီရတ်စစ်ပွဲကာလမှာ အီရတ်စစ်မှုထမ်းတစ် ဦးဖြစ်ခဲ့ပြီး နိုင်ငံတကာ ဥပဒေ ပညာပါရဂူဘွဲ့ ရရှိထားတဲ့ အီရတ်ဘလောဂါ၊ စာရေးဆရာတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ လာတစ်ဖ် ကိုယ်တိုင်က ဆက်ဒမ်ကို ထောက်ခံခဲ့သူတစ် ဦးဖြစ်ပေမဲ့ ဆက်ဒက်ရဲ့ မှားယွင်းတဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို မြင်တွေ့ ပြီးချိန်မှာ ဆက်ဒမ်အစိုးရအဖွဲ့ကို မုန်းတီးစိတ်ဝင်လာခဲ့ပါ တယ်။ အီရန်-အီရတ်စစ်ပွဲက ပြန်ရောက်လာချိန်မှာ အူဒေး ...
Azhar (2016) မြန်မာစာတန်းထိုး IMDB-6.1 ဒီကားကတော့ အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ ခရစ်ကတ်ကစားနည်းသမိုင်းမှာ အစောဆုံးနာမည်ကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ မိုဟာမက်အက်ဇ်ဟာရဲ့ ဘဝဇာတ်ကြောင်းကို ရိုက်ကူးပုံဖော်ထားတဲ့ အတ္ထုပတ္တိကားတစ်ကားပါ ဇာတ်လမ်းကတော့ တစ်ခြားတစ်ခြားသော Sport Biographical Movie တွေလိုပဲ ငယ်စဉ်ကတည်းကနေ အခုချိန်ထိ အောင်မြင်အောင် ကြိုးစားခဲ့ရပုံတွေကို မြင်တွေ့ရမှာပါ ၂၀၁၆ရဲ့ အတ္ထုပတ္တိကားကောင်းတစ်ကားလည်းဖြစ်တယ်လို့ ဆိုကြပါတယ် ဒီနေ့ကတော့ ကျွန်တော်တို့ စီအမ်က ဘောလိဝုဒ်ကားတွေ ဓာတ်ကျနေတယ်လို့ဆိုရမှာပဲ... ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့တွေ ဒီကားကိုလည်း စီးမျောခံစားကြည့်လိုက်ကြရအောင်ဗျာ...... (ဇာတ်လမ်းအညွန်းကို ကိုကို Ye Khant Min မှ ရေး ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်) File size…(850 MB) Quality…720p Bluray Format…mp4 Duration….01:30:30 Subtitle….Myanmar Subtitle (Hardsub) Encoder…. Thanhtike Zaw Download Here (850 MB) Download Small File Size (450 MB)
IMDB: 6.1/10 3,343 votes
Azhar (2016) မြန်မာစာတန်းထိုး
God’s Not Dead2(2016) မြန်မာစာတန်းထိုး ပထမကား god not dead 1 ကို ကြည့်ဖူးတဲ့သူတွေအနေနဲ့ မစိမ်းတဲ့ဇာတ်ကားတကားပါဗျ ခရစ်ယာန် ဘာသာကို လေ့လာခြင်သူတွေ မသိသေးတဲ့သူတွေအနေနဲ့ ကြည့်သင့်တဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းတကားဆိုတာ ၁ ကိုကြည့်ဖူးတဲ့သူတိုင်း သိကြမယ် ထင်ပါတယ် ပထမကားလိုပဲ ဘာသာတရားကိုအယုံအကြည်မရှိတဲ့ ဆရာနဲ့ ဘာသာတရားအပေါ် လုံးဝ ယုံကြည် စွဲလန်းမှုရှိနေတဲ့ ဆရာတပည့်တို့တွေ့ဆုံကြတဲ့ အခါမှာတော့ ဘယ်လိုတွေဆက်လက်ဖြစ်ပျက်နိုင်မလဲဆိုတာကို ဆက်လက်ရှူစားကြပါလို့ File Size : 850MB/ 433Mb Duration : 2hr 13min Quality : Bluray Rip720p Encoder : Thanhtike Zaw Download Here (850 MB) Download Small File Size (433 MB)
IMDB: 3.7/10 5,330 votes
God’s Not Dead2(2016) မြန်မာစာတန်းထိုး
Soul Surfer (2011) မြန်မာစာတန်းထိုး လူတိုင်း၌ ထူးခြားသော အခွင့်အရေးတစ်ရပ်စီ ပိုင်ဆိုင် ထားကြသည်။ သို့သော် ထိုအခွင့်အရေးကို ရယူအသုံးချနိုင်ရန်မှာ လူတစ်ဦးချင်းစီ စိတ်စွမ်းအားဖြင့်သာ သက်ဆိုင်မှုရှိ ကြောင်းကို Soul Surfer ဇာတ်ကား၌ ဖွင့်ဆိုခဲ့ပါသည်။ ဖြစ်ရပ်မှန်ကို အခြေပြုပြီး ရိုက်ကူးခဲ့သော ဇာတ်ကား ဖြစ်ပါသည်။ လက်တစ်ဖက်မရှိတော့ဘဲ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ရေလွှာလှိုင်းစီးသူဖြစ်လာခဲ့သည့် ဘတ်တနီဟမ်မယ်လ်တန် အကြောင်းကို ရိုက်ကူးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။IMDb Rating (7.1/10) ရရှိထားပါတယ်။ ဟမ်မယ်လ်တန်ကို ၁၉၉၀ပြည့်နှစ်၌ ရေလွှာလှိုင်းစီးသူ မိဘနှစ်ပါးမှ ဟာဝိုင်အီတွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။ မိဘများနည်း တူ ရေလွှာလှိုင်းစီးခြင်းကို ဝါသနာထုံသူဖြစ်ပြီး ငယ်စဉ်ကတည်းကပင် ရေလွှာလှိုင်းစီးခဲ့သူ ဖြစ်ပါသည်။ ထိုစဉ်က တည်းက ဟမ်မယ်လ်တန်ကို အလားအလာရှိသော ရေလွှာ လှိုင်းစီးသူ ဆယ်ကျော်သက်တစ်ဦးအဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့ကြသည်။ ဒေသတွင်း ပြိုင်ပွဲများတွင်လည်းထိပ်တန်းအဆင့်သို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ထို့ပြင် ကိုယ်လက်အင်္ဂါချို့ယွင်းမှုမရှိသော လူတစ်ဦးအဖြစ်လည်း ရပ်တည်ရှင်သန်နေခဲ့ပါသည်။ ၂၀ဝ၃ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၃၁ရက်နေ့။ ဟမ်မယ်လ်တန်နှင့် သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ အယ်လန်နာဘလန်ချက် နှင့် ရေလွှာလှိုင်းစီးထွက်ခဲ့သည်။ သူတို့နှင့်အတူ ဘလန်ချက်၏ ဖခင်လည်း လိုက်ပါခဲ့သည်။ ရေလွှာလှိုင်းစီးနေရင်းက ပင် ဟမ်မယ်လ်တန်ကို ငါးမန်တစ်ကောင်က ဝင်ဆွဲခဲ့သည်။ ...
Soul Surfer (2011) မြန်မာစာတန်းထိုး
Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows (2016) မြန်မာစာတန်းထိုး Teenage Mutant Ninja Turtles မြန်မာစာတန်းထိုးနဲ့ အကြည်ရပါပြီ။ ဒီ နံပါတ်၂ လိပ်နင်ဂျာကားမှာတော့ နံပါတ်၁ မှာ သူတို့ဖမ်းပေးလိုက်တဲ့ ဗီလိန်ကြီး ရှရက်ဒါ ပြန်လွှတ်လာပြီး အခြားကမ္ဘာတစ်ခုက ဂြိုလ်သားနဲ့ ပူးပေါင်းပြီး ကမ္ဘာကိုသိမ်းပိုက်မယ့် အန္တရာယ်ကို ညီအစ်ကို ၄ ယောက်တွန်းလှန်ကြတာပါပဲ။ ဒီအပိုင်းမှာ ဇာတ်ကောင်အသစ်ကေစီဂျုန်းအဖြစ် အဲရိုးမင်းသား စတက်ဖန် အမ်းမဲလ် သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ အက်ရှင်ကားကောင်းတစ်ကားအဖြစ် ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် ရိုက်ကူးထားသလို လုံးဝစရိုက်မတူညီတဲ့ ညီအစ်ကိုတွေ ဘယ်လိုနားလည်မှုနဲ့ အဖွဲ့တစ်ခုအဖြစ်လှုပ်ရှားနိုင်ခဲ့လည်း ဆိုတာကိုလဲ သရုပ်ဖော်ပြထားပါတယ်။ တစ်ခါတလေ ခက်ခဲတဲ့ရွေးချယ်မှုတွေ ကြုံလာတဲ့အခါ တစ်ယောက်တည်းရဲ့ အမြင်နဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာ ဘယ်လောက်စေတနာပါပါ အမြဲမမှန်နိုင်တာမို့ အဖွဲတစ်ခုရဲ့ စဉ်းစားဉာဏ်နဲ့ အင်အားဆိုတာ အမြဲထည့်တွက်ရမယ့်အရာဆိုတာ လိပ်ညီအစ်ကိုတွေကနေ သင်ခန်းစာယူရင်း ဟာသနဲ့အက်ရှင်ကောင်းတွေ ခံစားနိုင်ကြပါစေ။ (ဇာတ်လမ်း အညွန်းနဲ. ဘာသာပြန်သူကတော. Moe Myint Lwin ပဲဖြစ်ပါတယ်) File size…(1GB) Quality… 720p ...
Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows (2016) မြန်မာစာတန်းထိုး
Cell (2016) မြန်မာစာတန်းထိုး ကဲ ဒီတစ်ခါတော့ Cell ဆိုတဲ့ Horror/Si-Fi တစ်ကားနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေHorror တို့ရဲ့ ထုံးစံ အတိုင်းပဲ rating နည်းနေတာကတော့ ပြောစရာ မလိုလောက်ပါဘူးပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ သရုပ်ဆောင်တွေကလည်း ပရိတ်သတ်ကြီးနဲ့ မစိမ်းတဲ့ မင်းသား/မင်းသမီးတွေပါဇာတ်လမ်း ကလည်း ပုံမှန် Zombie ကားတွေလိုမဟုတ်ပဲ ဇာတ်လမ်းစပြီးကတည်းက ဇာတ်လမ်းရဲ့Tempo ကိုမြင့်လိုက်တာက ကြည့်ရှူ သူတွေအတွက် တမူထူးခြားနေမှာပါဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးကတော့ ပြပွဲအတွက် ခရီးထွက်နေရတဲ့ မင်းသားကြီး ဟာလေဆိပ်မှာ ခနနားနေတုန်း အိမ်က သားဖြစ်သူကို ဖုန်းဆက်နေရာမှ ထူးဆန်းတဲ့ Signal ကြောင့်ဖုန်းပြောနေသူအားလုံး စိတ်ရိုင်းဝင် အသိစိတ်လွတ်ပြီး အချင်းချင်း သတ်ဖြတ်ကုန်တဲ့အခါမှာတော့ဘယ်လိုများ ရင်ဆိုငိထွက်ပြေးမလဲ သားဖြစ်သူဆီကိုကောပြန်လည်ရောက်ရှိနိုင်ပါ့မလားဆိုတာတွေကိုတော့ ဒေါင်းယူကြည့်ရှူလိုက်ပါအုံး Download and Watch 720p HD (700 MB)
The Thing (2011) မြန်မာစာတန်းထိုး ဒီကားကတော့ သိပ္ပံသည်းထိတ်ရင်ဖိုဇတ်ကားတစ်ကားဖြစ်ပါတယ် ရေခဲပြင်ထဲကိုယာဉ်ကြီးတစ်စင်းပျက်ကျခဲ့တယ် အဲ့ဒီ့ယာဉ်ရဲ့အချက်ပြတစ်ခုဟာ သိပ္ပံပညာရှင်တွေအဖို့ စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်ခဲ့တယ် ဒါ့ကြောင့် ပညာရှင်အသီးသီးစုပေါင်းပြီး ယာဉ်ပျက်ကြီးကိုစူးစမ်းရှာဖွေမှုအစီအစဉ်စခဲ့တယ် ယာဉ်ပျက်ကြီးဆီရောက်တဲ့အချိန်မှာ အံအားသင့်စရာတွေကဆက်တိုက်ဖြစ်နေခဲ့တယ် ရေခဲတုံးထဲမှာ ဂြိုလ်သားလို့ယူဆရတဲ့အကောင်တစ်ကောင်တွေ့ခဲ့တယ် ပုံစံမပျက်စေဖို့အတုံးလိုက်ဖြတ်ပြီး ရေခဲပြင်မှာပဲရှိတဲ့သုတေသနစခန်းကိုယူလာခဲ့တယ် အားလုံးဟာ ဆက်လုပ်ရမဲ့သုတေသနအတွက် အတွေးကိုယ်စီ စိတ်ကူးကိုယ်စီတွေ ဆွေးနွေးရင်းပျော်နေခဲ့ကြတယ် ဒါပေမဲ့ အဲ့ဒီညမှာပဲ ရေခဲတုံးကြီးထဲက အကောင်ဟာ သိပ္ပံပညာရှင်အဖွဲ့ကို အန္တရယ်ဆိုးကြီးတွေကျရောက်စေခဲ့တယ် အသက်ကိုယ်ရန်ပြုစေတဲ့အပြင် လူသားတွေရဲ့ဇီဝဖြစ် စဉ်အသွင်းပြောင်းဟန်တွေပါလာခဲ့တယ် စာရေးဆရာ John W.camphbell ရဲ့ who goes there?စာအုပ်ကိုအခြေခံရိုက်ကူးထားတဲ့ဇတ်ကားဖြစ်ဖြစ်ပါတယ် JOEL EDGERTONနဲ့မင်းသမီးချော Mary Elizabeth Winstead တို့ကသရုပ်ဆောင်ထားပါတယ် တစ်ကားလုံးမှာ ဘယ်သူကအသွင်းပြောင်းသွားမလဲ ရန်ပြုနိုင်မလဲ ဒွိဟတွေနဲ့ အတော်လေးကိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့ဇတ်ကား မို့ခံစားကြည့်လိုက်ပါဦးလို့ (ဘာသာပြန်သူက တော. Myo Myint Maung ဖြစ်ပြီး ဇာတ်လမ်းအညွန်းကို ကို Phyo Pyae မှ ရေးပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်) File size…(664 MB) Quality…Blu-Ray Rip 720p Format…mp4 Duration….01:43:00 Subtitle….Myanmar ...
IMDB: 6.2/10 95,533 votes
The Thing (2011) မြန်မာစာတန်းထိုး